Orinasa sy mpamokatra kaontenera mpiorina karatra China. | SJJ
Ny mpihazona karatra telefaona misy fijoroana dia finday mety hametrahana ny carte de crédit, kara-panondronao, naoty, tapakila ary vola-nao. Mampiasà kasety 3M, lanja maivana ary mora entina miaraka amin'ny telefaona finday.Pretty Shiny dia manome karazana fomba miendrika telefaona finday avy amin'ny karazana suction ka hatramin'ny karazana snap, e ...
Ny mpihazona karatra telefaona misy fijoroana dia finday mety hametrahana ny carte de crédit, kara-panondronao, naoty, tapakila ary vola-nao. Mampiasà kasety 3M, lanja maivana ary mora entina miaraka amin'ny telefaona findainao.
Pretty Shiny dia manome karazan-telefaona miorina amin'ny finday manomboka amin'ny karazana suction ka hatrany amin'ny snap type, sns. Ny clip misy ny finday sy ny tompon'ny telefaona finday dia azo ampiasaina indray, izay azo antoka fa singa fampiroboroboana tsara ho an'ny finday avo lenta sy takelaka misy marika lehibe.
Fitaovana silipo malefaka, sariaka ara-tontolo iainana, tsy manimba, mora raisina sy madio
Famolavolana azo ampiharina, maharitra, mahafatifaty ary lamaody
Silicone miaraka amina ravina vy vita amin'ny elastika ary kasety fametahana 3M ao ambadika
Fametrahana mora, mora ampiasaina, mifikitra indray, azo esorina tsy misy residue miraikitra
Teo aloha: Raharaha telefaona
Manaraka: Telefaona fanoherana slip-pad finday